Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo dowladda isku soo dhiibay | KEYDMEDIA ONLINE
Sarkaal ka tirsanaa kooxda mintidiinta ah ee Al-Sahabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada Dowladda iyo kuwa Nabad ilaalinta ee AMISOM
QORYOOLEY, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose kusoo bandhigtay Sarkaal ay sheegtay in uu Al-Shabaab u qaabilsanaa Aagga degmadaasi, kaasoo isku soo dhiibay Ciidamada Dowladda.
Sida la sheegay Sarkaalkaan isa soo dhiibay ayaa waxaa degmada kusoo dhaweeyay taliyaha Ciidamadda madaniga Col Cali Waal iyo Taliyaha Ciidamadda AMISOM.
Ciidamada Dowladda iyagoo aan ku sameyn dhaqan celin, islamarkaana aan ku bixin dadaal dheer oo lagu xaqiijinayo sheegashadoodii hore ee soo goosashada ayey howl galiyaan.
Inbadan waxaa dhacday in laga dhigo dhar-cad, kaddibna ay la shaweeyaan saraakiisha sare ee dhar-cadka ah kuwaasoo ugu dambeyn isku daya in ay khaarajiyaan sidii hadda kahor ka dhacday Agagaarka Daalo ee jidka Soddonka, halkaasoo nin soo goostay uu isku qarxiyay taliyihii Ciidamada dhar-cadka ee aagga Daallo.
0 Comments Topics: shabeellaha hoose soomaaliya
Farmaajo oo sheegay inuu shaqada ka joojiyay RW Rooble
Warar 16 September 2021 15:38
Waxaa lagu tilmaamay tallaabadan is-miidaamin siyaasadeed, oo keeni karta in dalka uu galo qalalaase siyaasadeed oo dagaal horseedi karta.
Warar 16 September 2021 11:04
Farmaajo oo la kulmaya RW Rooble
Warar 11 September 2021 7:51
Rooble oo 48 Saac u qabtay Fahad inuu Warbixin ka keeno Kiiska Ikraan
Warar 4 September 2021 20:25
Fahad Yaasiin oo dhibaato u maraya ku soo laabashada dalka
Warar 17 September 2021 12:27
Waxaa soo baxaya war sheegaya in Fahad uu ka haray diyaaradda isla-markaana uu galabta soo raaci doono dulimaadka Qatar Airways, ee ku soo wajahan Muqdisho.
Maxay GMM ka yiraahdeen waraaqdii Farmaajo?
RW Rooble oo luuqaddii ugu adkeed kula hadlay Farmaajo
Tallaabada uu Farmaajo qaaday waa sharci darro